Opus စျေး - အွန်လိုင်း OPT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Opus (OPT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Opus (OPT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Opus ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $67 829.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Opus တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Opus များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OpusOPT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00296OpusOPT သို့ ယူရိုEUR€0.0025OpusOPT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00225OpusOPT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0027OpusOPT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0266OpusOPT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0186OpusOPT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0655OpusOPT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.011OpusOPT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00393OpusOPT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0041OpusOPT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0662OpusOPT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0229OpusOPT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0158OpusOPT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.222OpusOPT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.499OpusOPT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00405OpusOPT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00444OpusOPT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0921OpusOPT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0206OpusOPT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.312OpusOPT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.51OpusOPT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.15OpusOPT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.217OpusOPT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.082
OpusOPT သို့ BitcoinBTC0.0000002 OpusOPT သို့ EthereumETH0.000007 OpusOPT သို့ LitecoinLTC0.00005 OpusOPT သို့ DigitalCashDASH0.00003 OpusOPT သို့ MoneroXMR0.00003 OpusOPT သို့ NxtNXT0.212 OpusOPT သို့ Ethereum ClassicETC0.00041 OpusOPT သို့ DogecoinDOGE0.862 OpusOPT သို့ ZCashZEC0.00003 OpusOPT သို့ BitsharesBTS0.114 OpusOPT သို့ DigiByteDGB0.109 OpusOPT သို့ RippleXRP0.00956 OpusOPT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0001 OpusOPT သို့ PeerCoinPPC0.0105 OpusOPT သို့ CraigsCoinCRAIG1.32 OpusOPT သို့ BitstakeXBS0.123 OpusOPT သို့ PayCoinXPY0.0504 OpusOPT သို့ ProsperCoinPRC0.362 OpusOPT သို့ YbCoinYBC0.000002 OpusOPT သို့ DarkKushDANK0.926 OpusOPT သို့ GiveCoinGIVE6.25 OpusOPT သို့ KoboCoinKOBO0.644 OpusOPT သို့ DarkTokenDT0.00273 OpusOPT သို့ CETUS CoinCETI8.33